Chii Chinonzi Kubhabhatidzwa? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiRomani (ChechiVlax, Russia) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Garifuna Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Khakass Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Lari Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Mauritian Creole Maya Mingrelian Mizo Mongolian Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Pomeranian Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quiche Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Samoan Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Chii Chinonzi Kubhabhatidzwa?
Kubhabhatidzwa kunoreva kunyudzwa nekubudiswa kunoitwa munhu mumvura. * Ndokusaka Jesu akabhabhatidzirwa murwizi rwakakura. (Mateu 3:13, 16) Saizvozvowo, murume wekuItiopiya akakumbira kubhabhatidzwa paakasvika paiva “nemvura zhinji.”​—Mabasa 8:36-40.
Bhaibheri rinofananidza kubhabhatidzwa nekuvigwa. (VaRoma 6:4; VaKorose 2:12) Kubhabhatidzwa mumvura kunoratidza kuti munhu ava kufa pamararamiro ake ekare uye ava kutanga upenyu hutsva semuKristu akazvitsaurira kuna Mwari. Kubhabhatidzwa uye matanho aunotora usati wabhabhatidzwa, zvese izvozvo urongwa hwaMwari hwokuti munhu ave nehana yakachena inobva pakutenda kwake muchibayiro chaJesu Kristu. (1 Petro 3:21) Ndokusaka Jesu akataura kuti vadzidzi vake vanofanira kubhabhatidzwa.​—Mateu 28:19, 20.
Kubhabhatidzwa mumvura kunogeza zvivi here?
Aiwa. Bhaibheri rinodzidzisa kuti ropa raJesu rakadeurwa ndiro chete rinogona kuita kuti ticheneswe pachivi. (VaRoma 5:8, 9; 1 Johani 1:7) Zvisinei, kuti munhu abatsirwe nechibayiro chaJesu, anofanira kutenda muna Jesu, ochinja mararamiro ake kuti aenderane nezvakadzidziswa naJesu, obva abhabhatidzwa.​—Mabasa 2:38; 3:19.
Bhaibheri rinodzidzisa nezvekubhabhatidza vacheche here?
Aiwa, haridzidzisi izvozvo. Hapana panotaura nezvekubhabhatidzwa kwevacheche muBhaibheri. Mamwe machechi anoita mhemberero ‘yekubhabhatidza’ mucheche (vachiita zvekusasa mvura kana kuidururira mumusoro make) uye achipiwa zita. Vanhu vanobhabhatidzwa sevaKristu ndevaya chete vanenge vakura zvekuti vanenge vava kukwanisa kunzwisisa uye kudavira “mashoko akanaka pamusoro poUmambo hwaMwari.” (Mabasa 8:12) Kubhabhatidzwa ikoko kune chekuita nekunzwa shoko raMwari, kurigamuchira, uye kupfidza, asi mucheche haakwanisi kuita izvozvo.​—Mabasa 2:22, 38, 41.
Bhaibheri rinoratidzawo kuti Mwari anoona vana vadiki vevaKristu sevatsvene kana kuti sevakachena mukuona kwake, nemhaka yekuti vabereki vavo vanenge vakatendeka. (1 VaKorinde 7:14) Kudai vana vacheche vaifanira kubhabhatidzwa, paisazodiwa mumwe munhu akatendeka kuti ivo vanzi vatsvene. *
Zvinofungwa nevamwe panyaya yekubhabhatidzwa kwechiKristu
Zvavanofunga: Kusasa kana kuti kudurura mvura pamunhu kwakangofanana nekunyudza munhu mumvura.
Chokwadi nezvenyaya iyi: Kubhabhatidzwa kwese kunotaurwa muBhaibheri kwaisanganisira kunyudzwa mumvura. Semuenzaniso, mudzidzi Firipi paakabhabhatidza murume wekuItiopiya, “vakapinda mumvura.” Pashure pacho, ‘vakabuda mumvura.’​—Mabasa 8:36-39. *
Zvavanofunga: Bhaibheri parinotaura nezvekuti imba yese yakabhabhatidzwa rinenge richirevawo vacheche vemumhuri idzodzo. Semuenzaniso, richitaura nezvemurindi wejeri: “Vose zvavo, iye nevokwake vakabhabhatidzwa.”​—Mabasa 16:31-34.
Chokwadi nezvenyaya iyi: Nhoroondo yekutendeuka kwemurindi wejeri inoratidza kuti vaya vakabhabhatidzwa vakanga vanzwisisa “shoko raJehovha” uye kuti ‘vakafara kwazvo.’ (Mabasa 16:32, 34) Izvozvo zvinoita kuti titi vacheche vaiva mumhuri yemurindi iyeye wejeri havana kubhabhatidzwawo, nekuti vaisakwanisa kunzwisisa shoko raJehovha.
Zvavanofunga: Jesu akadzidzisa kuti vacheche vanofanira kubhabhatidzwa paakati Umambo ndehwevana vadiki.​—Mateu 19:13-15; Mako 10:13-16.
Chokwadi nezvenyaya iyi: Jesu paakataura mashoko iwayo akanga asiri kutaura nyaya yekubhabhatidzwa. Asi kuti airatidza kuti vaya vanokodzera kupinda muUmambo hwaMwari vanofanira kuita sevana, pakuti vanofanira kuva vanyoro uye vanodzidzisika.​—Mateu 18:4; Ruka 18:16, 17.
^ ndima 1 Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “kubhabhatidzwa” rinobva pamudzi wechiito chinoreva “kunyudza.” Ona bhuku rinonzi Theological Dictionary of the New Testament, Volume I, peji 529.
^ ndima 5 Maererano nebhuku rinonzi The International Standard Bible Encyclopedia, “muTestamende Itsva hapana panombotaura nezvekubhabhatidzwa kwevacheche.” Rinotaura kuti tsika yacho yakatangira “pamafungiro asiri iwo uye ekuwedzeredza panyaya yemaonerwo aiitwa kubhabhatidzwa,” ekuti kubhabhatidzwa pachakwo kunogeza zvivi.​—Volume 1, mapeji 416-​417.
^ ndima 7 Mubhuku rinonzi New Catholic Encyclopedia pamusoro unoti “Baptism (in the Bible),” panoti: “Zviri pachena kuti paibhabhatidzwa munhu muChechi aiita zvekunyudzwa mumvura.”—Volume 2, peji 59.
Unofanira kutanga waberekwazve here kuti uzova muKristu?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Chii Chinonzi Kubhabhatidzwa?
ijwbq nyaya 110